Osimiri Greenway dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Hudson river greenway - olee otu ị ga-esi gboo
Hudson river greenway - olee otu ị ga-esi gboo
Osimiri Greenway dị mma?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-echere ọ dịkarịa ala afọ abụọ ọzọ maka ezigbo,nchebeigwe kwụ otu ebe n'ụzọ ndị kachasị mma nke igwe kwụ otu ebe, n'agbanyeghị Ngalaba Parks na-ama ọkwa na ogologo ogologo nkeOsimiri Greenwayna Upper West Side dị ize ndụ n'ihi mgbawa na bumps nke mgbọrọgwụ osisi ochie.Ọkt 23 2020
N’ọnwa Mee, Amazon kwuputara na ọ ga-ebuputa netwọkụ ntaneti ọhụụ akpọrọ Sidewalk na June 8, 2021. Ọrụ a na-enyere ngwaọrụ Amazon ndị dị ka Echo Smart Speakers ma ọ bụ Ring Video doorbells aka ịkekọrịta njikọ Internetntanetị na ibe ha, ọbụlagodi na ngwaọrụ dị nso. . N'ụzọ ahụ, ọ bụrụ na otu njikọ ịntanetị gbadata, n'ụzọ dị otu a ngwaọrụ ndị ahụ nwere ike ịnọ n'ịntanetị.
ugwu igwe kwụ otu ebe na-adọkpụ
Nyere akụkọ ihe mere eme nke onye ọrụ nzuzo nke Amazon, egwu nke nyocha ịntanetị pụtara ngwa ngwa. Achọrọ m ilele otú Amazon Sidewalk si arụ ọrụ yana Ọ bụrụ na ị na-eso ọwa m, ị ga-amata na m na-akatọkarị itinye aka Amazon na ngwanrọ ihu ihu, drones ndị agha, ma ọ bụ nupụta data nkeonwe, ma kpebie ịnwale eziokwu dị ka kachasị mma: Amazon Sidewalk na-eji Bluetooth Low Energy ma ọ bụ ikuku ikuku ndị ọzọ dị ka eriri 900 MHz nke na-enye ọtụtụ ekwentị ndị na-enweghị eriri aka. Ka ọ dị ugbu a, netwọkụ mesh gbadoro na nkwuputa okwu dị elu na mgbịrịgba ọnụ ụzọ dị ka akwa mmiri, kamakwa na-akwado ndị na-enyocha taịlị, dịka ọmụmaatụ ịchọta igodo ndị na-ekwesịghị ekwesị.
A na-arụ ọrụ n'akụkụ ụzọ na ngwaọrụ ndị a ọ gwụla ma ị pụọ. Nwere ike ịchọta ọtụtụ ihe ntanetị n'ịntanetị maka otu esi apụ ma ọ bụrụ na ịnwere otu ngwaọrụ ndị a. Ya mere, netwọk na-eji ngwaọrụ Amazon ndị agbata obi ka ha nọrọ na njikọ, WiFi nke gị abụghị nke ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị ma na-enye ohere ka mpụga Amazon ngwaọrụ iji obere akụkụ nke ịntanetị bandwit gị.
Ejiri bandwidth na 500MB nke data kwa ọnwa. Amazon bipụtara akwụkwọ akụkọ na nchekwa na nzuzo nke Sidewalk. Ana m anwa ichikota isi ihe: Ọ na-eji sava abụọ dị mkpa, Sidewalk Network Server, nke Amazon na-arụ ọrụ ma na-ahụ maka ịlele na zipu ngwugwu netwọkụ na sava ngwa nke Amazon ma ọ bụ ndị ọzọ ga-akwado. ma na-ahụ maka ha maka arụmọrụ ngwaahịa a kapịrị ọnụ; naanị ihe nkesa ngwa ahụ nwere ike ịhụ ọdịnaya nke ngwugwu dịka enwere ọtụtụ izo ya ezo.
Ndị sonyere na netwọkụ ụzọ nwere ike iwepu ụfọdụ ọkwa nke netwọkụ iji chebe ozi na-enweghị isi (ngwaọrụ ndị na-eji njikọ agbataobi) enweghị ike ịhụ ozi ọ bụla gbasara onye nwe netwọkụ. Onye nwe netwọkụ ahụ, n’aka nke ya, enweghị ike ịhụ ozi ọ bụla gbasara njedebe. Dabere na Amazon, metadata na-edebe opekata mpe.
The Central Sidewalk Network Server na-enweta, dịka ọmụmaatụ, oge nnyefe na NJ ID maka izigha ngwugwu. Ọ bụ ezie na akwụkwọ Amazon na-enyere aka ịghọta usoro ahụ, Akụkụ okporo ụzọ yana ngwaọrụ ndị ọ na-akwado abụghị isi mmalite. Nke a pụtara na ndị ọrụ ga-atụkwasị Amazon obi na sistemụ ahụ na-arụ ọrụ dị ka a kpọsaara na enweghị adịghị ike enweghị ederede, n'echiche m akụkọ ntolite Amazon maka ijikwa data nkeonwe, dị ka ịchekwa na ịtụle olu, ndekọ ma ọ bụ ndị isi nwere ike iji isiokwu arịrịọ ha na olu ha. ihe ndekọ na ngwaọrụ dịpụrụ adịpụ bụ ihe siri ike na-egosi na nzuzo onye ọrụ abụghị nchegbu ha bụ isi.
Na mgbakwunye na enweghị ntụkwasị obi m, enwere ọghọm nchekwa nchekwa nke Ntanetị nke Ihe teknụzụ. Igwefoto IP, ndị na-agagharị agagharị, igwe okwu, enwere botnets niile nke ngwaọrụ IoT na-enweghị nchebe. Na mkpokọta, ha anaghị enweta mmelite nche ma na-elegharakarị anya dị ka ihe egwu nchekwa.
Nsogbu ọzọ m nwere na Sidewalk bụ nbanye akpaka. Ọtụtụ ngwaọrụ Amazon dị ugbu a na-eme ka ọrụ ahụ nwee ọrụ na-akpaghị aka. Ọbụlagodi na amara ndị ọrụ ọkwa, ọtụtụ agaghị ahụ nsonaazụ nhọrọ ahụ.
Mmelite a na-akpaghị aka na-egosikwa na ndị ahịa enweghị ezigbo njikwa maka ngwaọrụ ndị a: ọ bụrụ na ndị na-awakpo ahụ enweta ohere n'oge ọ bụla n'ọdịnihu just nwere ike dịka ọ na - adị mfe ịme mgbanwe na-adịghị mma na ngwaọrụ maka usoro melite Amazon. N'ihi ya, m na-ahụ ihe egwu kasịnụ na Amazon Sidewa. Ọ bụghị nke ukwuu ihe ọ bụ ugbu a, kama ihe ọ ga-abụ.
Cheedị banyere nje na-eji ngwaọrụ ndị a na-ejikọ site n'ụlọ ruo n'ụlọ. Karịsịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụrụ m otu ihe ahụ ugboro ugboro: ebubatala akụrụngwa na-arụ ụka ma ọ bụ iwu na nkwenye na a na-eji ya eme ihe megidere otu ihe a nke na onye ọ bụla enweghị mmasị ma ọ bụ na a ga-eji ya n'okpuru ọnọdụ siri ike. Mana mgbe ahụ, n'ime afọ ndị na-esote, mgbe ọtụtụ mmadụ kwagara n'okwu ndị ọzọ, ụkpụrụ nduzi ndị a na-emebi emebi, nke yiri ka ọ bụ ihe kachasị emetụta iwu nyocha.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla yiri nke a ga - eme Amazon Sidewalk, mana ozugbo akụrụngwa dị ebe a ga - emecha kpọọ oku iji ya.
Ogologo oge ole ka Hudson River Greenway?
Ndi Hudson River Greenway ghe oghe?
Ihenzọ ụkwụgbasara 750-kilomita, site na New York City site naHudsonna Champlain Valleys na Canada, sikwa Albany gaa Buffalo n’akụkụ Osimiri Erie. Ihenzọ ụkwụmejupụtara tumadi ụzọ-ụzọ, 75 pasent steeti, na pasent 85 naNdagwurugwu Hudson, ebe ndị ọzọ nọ n'okporo ụzọ.
minty news na-atụle okwu maka gị na ezinụlọ gị ihe karịrị afọ atọ thomas heatherwicks pier 55 ma ọ bụ na nso nso renamed obere agwaetiti a na-ewu ma meghere naanị ụbọchị ole na ole gara aga na-ese n'elu mmiri oasis ma ọ bụ ogige na mmiri na-eme atụmatụ na-uru ihe e mere atụmatụ 260 Nde dollar ahụ bụ nke onye ọchụnta ego Barry Diller na nwunye ya na-akwado, bụ Diane von Furstenberg, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ na-ese n'elu mmiri, a rụrụ ogige ahụ na Osimiri Hudson na New York ma na-ejide ya site na okporo osisi ndị yiri tulip dị ka nke ndị wuru. Atherlọ ọrụ Heatherwick na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ihe owuwu ala mla. Obere agwaetiti nwere ngụkọta nke hectare 2.4 na ọ bụ paradaịs dị ọcha.
Otú ọ dị, iwu ma ọ bụ inye ego ụdị ihe ịma aka ahụ adịghị mfe. Onye oru a bu Barry Diller choputara ya na 2014, onye mechara merie nsogbu mgbe onu ahia riri elu site na nde 35 rue nde 250. mgbe ọtụtụ ihe nkiri dị ka akwụkwọ akụkọ New York Times na-akpọ ọrụ ahụ nwụrụ anwụ na gburugburu ebe dị iche iche al Processs Diller kpọrọ ya na September 2017.
Mana na-atụghị anya ya, Gọvanọ Andrew Cuomo batara naanị ọnwa abụọ ka nke ahụ gasịrị wee nwee nkwekọrịta iji tinye ego nke $ 50 nde n'okwu a na-adọba ụgbọala na-eweghara ma ọ bụrụ na Cuomo na-eme ka mmezu na mmezigharị n'akụkụ ndị ọzọ nke Osimiri Hudson kama, Cuomo akpọpụtara n'oge na-adịghị anya obodo ahụ iji zute ego a kwadoro, dị ka ọnụ na-ekwuchitere Melissa Grace, onye kwuru na anyị nwere obi ụtọ ịrụ ọrụ na steeti ma anyị kwenyela ị nweta ego maka akụkụ a nke itinye ego na nsonaazụ nke 160 nde na Gọvanọ Andrew Cuomo yana obodo nyekwara nsonaazụ nke 100 nde iji mee ka ụgbụ ikpeazụ nke obere agwaetiti dị nde 260 dịkwuo elu. Obere agwaetiti dochie Pier 54 ma ọ bụ ebe njedebe nke Titan Survivor na Eprel 1912 ma nọrọ ebe ahụ na hudson osimiri greenway new york 10014 Ihe nkiri ndị na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ na-agbago na ala na-enye echiche dị ebube ma dịgasị iche iche nke New York skyline ụlọ ọ bụla na-enye Ulo ezumike Agwaetiti ahụ nwere ebe egwuregwu amphithera maka ịgba egwu egwu ihe nkiri, nka ọha na eze, na mmemme obodo .Nke a bụ obere egwuregwu izu ụka Little Island nke gunyere ndị na-ese ihe n'obodo na-eme n'otu ụbọchị na n'otu oge nke izu ahụ ga-eme.
Site ugbu a gaa n'ihu enwere mgbochi n'ihi otu aha mkpuchi. A na-achọ ndoputa ịbanye na oge site na 12 elekere. maka ụmụaka site na afọ 3. Ogige ahụ mepere site na 6: 00 gaa 1: 00 am
Obodo igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ụgbọ ala gị Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ bara uru mgbe ị na-aga obere agwaetiti. Ihe niile edere ma nweta site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ha Enwere ike ịnweta obere obere agwaetiti ndị a ma ụlọ ndị a bụ akwa mmiri dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke na-eche ihu ikpochapụ nke ama egwuregwu egwuregwu ahịhịa na amplifiers m kwuru na ea rlier northwest ebe egwuregwu ahụ dị ka ụlọ ikpe nri, na na weebụsaịtị Little Island nwere ọtụtụ nri naanị ka ị nwee ike ịhụ ihe ha ga-enye. Ekwadoro m ịlele ebe nrụọrụ weebụ ha maka ozi ndị ọzọ, dị ka: B.
Little Island zuru akụkọ ihe mere eme na ọhụụ nke na-abịa ihe, iri nhọrọ ..? Community na mmemme dị ka ọwa ụmụaka na onye nwere ike ime ihe ga-amasị m ịkwado gị na mkpocha, nke na-enye ụmụaka nke ọgbọ niile na ezinụlọ na-emeghachi ihe omume dịka ọrụ aka, oge ezumike okike, obere ọba akwụkwọ na ọrụ ụlọ ọrụ Mmeri Ọhụrụ. onye ọ bụla na kpamkpam n'efu, ihe ọ bụla ọ bụ maka Na-eme ka ebe zuru oke ịga ije, nweta ikuku ọhụrụ, sonye na mmemme a na-eme kwa ụbọchị na-atọ ụtọ ihe ngosi ma soro ndị ezinụlọ na ndị enyi nwee ezigbo oge. Enwere m olileanya na isiokwu a nyere aka inweta ndabere ozi gbasara obere agwaetiti ahụ.
Ọ bụrụ otu a, pịa bọtịnụ 'Idenye aha' ma sonyere anyị na usoro ọhụụ ọhụụ nke anyị ka malitere site na ụmụaka Minty na ezinụlọ site na ịpị akara ngosi mgbịrịgba ahụ na ịkekọrịta ọwa anyị na ndị ọzọ. Lee gị n'isiokwu na-esonụ site na Minty News
nweta uru ịgba ígwè
Ebee ka m ga-abanye Hudson River Greenway?
HudsonN’ebe Ọwụwa AnyanwụOsimiri
IheOsimiri Greenwayugbu a agwụla kpamkpam kemgbe 9/11. Nke nke dị nso na saịtị WTC ka emerenzọ ụkwụugbu a si 181st Street (ma gafee George Washington Bridge) gaa Battery Park.
Enwere ọdụdụ na azụ mmiri na Hudson River?
DEC anatala akụkọ banyere ezigbo nkịta dogf na-egwu mmiri naHudson, ọ bụ ezie na ọ bụghị n’ebe dị anyaosimiri, 'onye na-ekwuchitere DEC gwara yaHudsonNdagwurugwu Post na email. Dogfishsharkachọtala oge ụfọdụ na mmiri dị ọcha, agbanyeghị na shark enweghị ike ịlanarị ogologo oge na mmiri mmiri, Florida Museum Museum na-akọ.Sep 14 2020
Olee otu osimiri Hudson dị ize ndụ?
IheHudsonnwere ogologo akụkọ ihe mere eme na mmepụta ụlọ ọrụ yana, gụnyere PCBs na ọla dị arọ. Ihe ize ndụ ha na-adị ogologo oge, na-eri nri oge na-eso akpata ọrịa na ọrịa cancer.Ọgọst 31 2016
Osimiri Greenway dị mma n’abalị?
BụHudson River Greenway mma? N'ụtụtụ, ọ bụ kpam kpamnchebemaka ezinụlọ.Ọkt 12 2020
Nwere ike ịga ije n'okporo ụzọ ahụ?
Mmiri ahụGreenway nwere ikemechaaotuụbọchị ma ọ bụị nwere ike ịga ijema ọ bụ okirikiri ngalaba n'otu oge, na-akwụsị ụfọdụ n'ime ọmarịcha obodo na obodo nta ndị dị n'ụzọ ahụ. Cycle si Kiloteran gaa Kilmacthomas ma ọ bụjee ijesite na Durrow ruo Clonea, ịmasị ụfọdụ n'ime oke osimiri mara mma.
Nwere ike ịga ije n’akụkụ Osimiri Hudson?
Osimiri HudsonWalzọ Walkway
Okporo mmiri dị n'akụkụ Manhattan bụ ụzọ dị kilomita 12.9 site na okporo ụzọ. Ọ bụ nke ihe na korota, na-agba ọsọn’akụkụ Osimiri Hudsonmmiri mmiri na Manhattan CBD n'akụkụ nke ọzọ. Ọ bụ n'ezieotunke Kasị mara mma obodoejegharị ị nwere ikenara, ọ bụkwa Obodo Ọhụrụ.Ọkt 12 2020
Nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè na Hudson River Greenway?
Gba ígwèiheOsimiri Greenway. kilomita 11igwe kwụ otu ebeụzọ na-agba ọsọ naOsimiri Hudson- site na nsọtụ ndịda Manhattan na Battery Park ruo Bronx - yana raara onwe ya nyeigwe kwụ otu ebeụzọ ndị emechiri ka ụgbọ ala. Akwụ ụgwọ ụlọ aigwe kwụ otu ebebụ ụzọ kachasị mma iji nwee ọmarịcha ebe nkiri ndị na-ewu ewuGreenway.
Ebee ka Hudson River Greenway dị na New York?
Hudson River Greenway Nkọwa. Lelee Map okporo ụzọ. The Hudson River Greenway (HRG) bụ otu n’ime ebe ndị ama ama ịgba ịnyịnya, ịga ije, na jog na New York City. Ọ na-eme akụkụ nke Manhattan Waterfront Greenway loop, cross-state Empire State Trail, na multistate East Coast Greenway.
Ebee ka Greenway dị na New York City?
Ọ bụ Ngalaba Parks na Ntụrụndụ New York City na-arụ ọrụ kachasị akụkụ. E kewapụrụ ya n'okporo ụzọ moto, ọtụtụ ngalaba na-ekewapụkwa ndị ji ụkwụ aga na ndị na-agba ịnyịnya. E nwere ụzọ isi atọ - East, Harlem na Hudson River Greenways. Ghara inwe mgbagwoju anya na Osimiri Hudson Waterfront Walkway.
Ndagwurugwu Osimiri Hudson bụ Mpaghara Ihe Nketa Mba?
Osimiri Ndagwurugwu Hudson na-achịkwa Mpaghara Ihe Nketa nke Ndagwurugwu Hudson, nke ndị Congress họpụtara na 1996 ma bụrụ otu n'ime Mpaghara Heritage National Heritage dị iri anọ na itoolu ugbu a na United States.